အမြင်အေး စေပြီး ရင်အေးစေတဲ့ အလှလေး နဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် …. – Shwe Thoon 8 Online Media
အမြင်အေး စေပြီး ရင်အေးစေတဲ့ အလှလေး နဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ….
.ပရိသတ်ကြီးရေ…..မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေကနေ တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနုသွေးဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့ပရိသတ်တွေစတင်သတိထားမိလာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ဟာ အခုလက်ရှိ မှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအတော်များများဟာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာပါ။ သူမဟာမိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးပြီး အေးဆေးစွာနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူပါ။
မေမြင့်မိုရ်ဟာ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း ပျော်ပျော်နေ တတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာရှင်အချင်းချင်းကြားမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ relationship ရှိတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။
မေမြင့်မိုရ်ဟာ အခုလက်ရှိမှာ ဆိုရင်လည်းအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကလည်း သူမရဲ့Facebookစာမျက်နှာမှာ “လွမ်းနေတယ်ဆို” ဆိုတဲ့captionလေးနဲ့ ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာပါတယ်။ ကဲ….ပရိသတ်တွေအတွက် မေမြင့်မို ရ်ရဲ့ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်။
အမြင်အေး စေပြီး ရင်အေးစေတဲ့ အလှလေး နဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ်
ပရိသတ်ကြီးရေ…..မင်းသမီးချောလေး မေမြင့်မိုရ် ကတော့ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေကနေ တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းနုသွေးဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးနဲ့ပရိသတ်တွေစတင်သတိထားမိလာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်ဟာ အခုလက်ရှိ မှာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပါ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
← လုံခြုံရေး အားနည်းတဲ့ဒေသများမှ ကျောင်းတွေ ကို ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီ မစစ်ဆေးနိုင်တော့ …..
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ တွင် ရုရှား နိုင်ငံ မှတ်ပုံ တင်မည် ……. →